Vokatra mivaingana no andrasana… | NewsMada
Vokatra mivaingana no andrasana…
Saron’ny mpiasan’ny ladoany ao amin’ny seranam-piaramanidin’i Kuala Lumpur, Malezia, ny alahady teo, ny sokatra 300 mahery, nentin’ny fiaramanidina avy aty Madagasikara. Sokatra voalaza fa anisan’ireo tena arovana mafy manerana izao tontolo izao ireto biby ireo. Natao tao anaty kesika lehibe dimy izy ireo, ary mahatratra any ho any amin’ny 276.800 dolara ny tentimbidiny.
Mampametra-panontaniana ny zava-misy. Mahalasa saina lalina ary tena mahavariana sy mahatalanjona mihitsy. Iray aloha, tsy vao sambany ny fisian’ny trafikana sokatra tahaka izao. Ny eo, voasambotra, atolotra ny fitsarana; ny eo, mitranga ihany. Toa tsy misy fiafarany mihitsy ka alaim-panahy ny mpandinika hanontany: misy tsimatimanota mihitsy ve ao anatin’ity tambajotra mpanao trafikana sokatra ity? Tena manao ny asany ara-dalàna ve sa ahoana ireto tompon’andraikitra eny amin’ny seranam-piaramanidina? Dimy kesika lehibe izao no nasiana ireo sokatra ka tena mahalasa saina raha tsy nisy nahita na nahatsikaritra izany. Na inona lazaina, na inona ambara, tsy maintsy nisy tsikombakomba tao matoa tafavoaka ireo kesika ireo.
Mety ho olona ambony manana ny hery sy fahefana, afaka manindry sy mibaiko no ao ambadik’izao trafika tsy manam-pitsaharany izao. Tsy ho olonolom-poana, na madinika velively. Iza marina àry izy ireo? Tsy misy afaka hamaly izany fanontaniana izany afa-tsy ireo mpiasa tompon’andraikitra, mpanara-maso ao an-tseranam-piaramanidina ao ihany.
Any mihitsy izany no tokony hiaingan’ny famotorana sy fanadihadiana lalina. Fanadihadiana lalina tsy hananan-kavana na atao kiantranoantrano. Vokatra mivaingana, azo tsapain-tanana izao ny andrasana hivoahan’ny marina amin’ity resaka ity. Resaka ambony latabatra ny ankoatra izay.